'Iiraan jirdil ayey ii geysatay si aan u qirto inaan ahay basaas Israa'iil' - BBC News Somali
'Iiraan jirdil ayey ii geysatay si aan u qirto inaan ahay basaas Israa'iil'
Image caption Mazyar Ebrahimi wuxuu sheegay 40 malmood har iyo habeenba in la jirdilayey
Ganacsata u dhashay dalka Iiraan ayaa sheegay inuu nasiib leeyahay mar haddii uuba nool yahay, iyada oo ay in mudda ahba jirdil ku sameeynayeen hay'adaha ammanka Iiraan si uu qirasha been ah oo ku saabsan inuu basaas u yahay Israa'iil ay ugu qasbaan iyo inuu dilay saaynisyahan dhinaca Niyuukilarka oo Iiraan u dhashay, dambigaasi haddii lagu heli lahaana daldalaad uu ku muteysan lahaa.
Mazyar Ebrahimi ayaa wariyaha BBC ee afka Persia Jiyar Gol ayaa uga warramay, waxyaabihi uu kala kulmay sirdoonka dalka Iiraan wuxuuna ka diyaariyey warbixintan.
Mazyar Ebrahimi waxaan kula kulmay Frankfurt bishi July, dhawr bilood kaddib marki uu igala soo xiriiray dalka Jarmalka waan yaabay waxaan islahaa mar hore ayaa la dilay.
Sababta aan sidaa u leeyahay waxay tahay 2012-kii ayaa Ebrahimi iyo 12 qof oo kale telefishiinka dowladda la soo fadhiisiyey iyaga oo telefishiinkana xilligasi laga sheegay 100-kooduba in dil lagu xukumay.
Iyaga oo Kaameerada hor fadhiya marka telefishiinka laga baahinayey, waxay sheegeen iney Israa'iil soo tababartay inta ay Iiraan ku soo laaban, ayna dileen Saaynisyahanka Niyuukilarka Iiraan.
Qoraalka ay raggaasi akhrinayeenna waxaa soo diyaariyey laanta sirdoonka Iiraan, mid ka mid ah laamaha sirdoonka Iiraanna waxay xilligaasi sheegtay iney burburiyeen shabakadda sirdoonka Israa'iil.
Qolka uu huteelka ka dagganaa ayaan ku daawaday qiraalka beenta uu ka sameeyey eedda loo soo jeediyey.
Mazyar Ebrahimi wuxuu sheegay marki 40 maalmood har iyo habeen jirdil loo geysanayey uu oggolaaday "inuu qirto" eeddi loo haystay.
"Qolooyinka baaritaanka igu hayey waxay fiilada korontada ay iiga garaacayeen cagaha" ayuu yiri ninka 46 jirka ah isaga oo xusuusinayo jirdilki loo geystay.
"Lugta ayeyna iga jabiyeen. Garaaciddana waxay igu wadeen toddoba bilood oo xiriir ah."
Inta ay sirdoonka dowladda Iiraan soo qaban Mr Ebrahimi wuxuu lahaa Shirkad Istuudiyayaasha Telefishiinnada diyaariso. Wuxuuna inta badan u safri jiray dibadaha isaga oo shaqooyin ka soo qabanayey.
Wuxuuna aaminsan yahay mid ka mid ah ganacsatada uu tartanka ka dhaxeeyo uu si been ah ugu eedeeyey inuu jaajuus u yahay ajnabi."
Inta u dhaxeysay 2010-12, afar Saaynisyahannada Niyuukilarka ee Iiraan ayaa la khaarijiyey, laamaha mukhaabaraadka Iiraanna waxaa soo food saaray cadaadis xooggan oo ay ku baadi goobayaan dambiilayaasha dilka geystay.
Mr Ebrahimi wuxu ka mid yahay 100-ka qof oo lagu soo eedeeyey iney basaas yihiin.
Wuxuuna sheegay inuu diyaar u ahaa eed kasta oo loo soo jeediyo inuu aqbalo si uu u dhinto, si uga nasto xadgudubyada iyo jirdilka joogtada ah ee loo geysto.
Balse inkasta "oo uu qirtay" eeddi loo heystay Mr Ebrahimi wuxuu sheegay, iney dambi baarayaashi su'aalaha weydiinayey ay doonayeen xog intaa dheer.
2011-kii qarax ka dhacay warshad lagu farsameeyo gantaallada oo ay gacanta ku hayeen ciidamada ilaalada kacaanka, waxaa ku dhimatay qaraxaasi khubaro dhinaca gantaallada.
Mr Ebrahimi wuxuu sheegay iney laamaha sirdoonka ay ku qasbayeen inuu qirto inuu isagu ka dambeeyey qaraxaasi.
Khabiir dhinaca ammaanka iyo Niyuukilarka Iiraan Mehdi Mahadavi wuxuu sheegay laamaha sirdoonka Iiraan iney been abuurtaan oo ay dadka rayadka ah oo aan waxba galabsan si ay u qirtaan dambiyo aysan gelin.
Mr Ebrahimi marka la soo daayey kaddib wuxuu dacwad ka dhan ah uu u soo jeediyey wasaarradda sirdoonka iyo telefishiinka dowladda Iiran iyo wargeysyo badan oo ay dowladdu leedahay oo eedeyn been ah ku eedeeyey iney Israa'iil u basaasayeen.
Mr Ebrahimi wuxuu dalka Jarmalka uu aaday 6 bilood ka hor, isaga oo magangalyo siyaasadeed ka helay.
Shaqsiyaadka lagu qasbay "iney qirtaan" Israa'iil iney u basaasayeen, mid ka mid ah ayaa lagu fuliyey xukunki loo go'aamiyey, ayuu yiri.
Lahaanshaha sawirka Iran state TV
Image caption Telefishiinka dowladda wuxuu baahiyey Fashi oo wata basboorka Israa'iil
Majid Jamali Fashi waxaa la dilay laba bilood ka hor inta aan Mr Ebrahimi la xirin.
Telefishiinka dowladda Iran sawirka ay ku sheegtay baasboorka Israa'iil inuu sitay Fashi, waa mid la isku habeeyey baasboorka Israa'iilna waxay ka soo qaateen Wikepedia kaddibna ay dul saareen sawirka Fashi.
Mr Fashi ayaa la aaminsan yahay in la xiray marki xog ku saabsan dibloomasiyadda Mareykanka laga baahiyey Wikileaks 2009-ka.
Wikileaks kama soo jawaabin codsiga loo diray in arrintan wax laga weydiiyo.